Akwụkwọ edemede 5 edubere maka May | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ edemede 5 mere atụmatụ maka May
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ule, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
Mee. Ma anyị dị ka anyị, mana ọ dị ntakịrị mma. Ọzọkwa maka ya ibipụta akwụkwọ ahịa na, n'agbanyeghị ihe niile, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Ya mere, ebe ha hụrụ ụfọdụ ọkụ na-enwu na njedebe nke ọwara a dị egwu, ebe ha na-aga Isi 5 họọrọ onye malite ndokwa maka ọnwa a. Anyị na-atụ anya na nke a bụ ikpe na, karịa ihe niile, na anyị nwere ike ịga ụlọ ahịa akwụkwọ maka ha.
1 Nwa ọhụrụ - Carmen Mola
2 Ọrịa - Slavoj Žižek
3 Ọbara na Snow - Jo Nesbø
4 Ihe edetu nke Etty Hillesum. Ndụ jọgburu onwe ya
5 Mmehie - Carmen Román
Nwa ọhụrụ - Carmen Mola
Ezubere maka 28 maka Mee, anyị nwere atọ aha nke Carmen Mola dere, ihe ohuru ohuru n'akwukwo nmebi iwu nke obodo, onye onye ya bu ihe omimi. Nke a na nkeji nkeji agụụ Elena White ha rere anyị ya ime ihe ike na-awụ akpata oyi n'ahụ.
Nkata ahụ gbara gburugburu Czech, onye otu BAC (Case Analysis Brigade) nke na - anatazi iwu na onye na-apụ n'anya mgbe gị na onye bịara abịa nọrọ n’abalị nke Afọ Ọhụrụ ndị China. Mgbe ndị ibe ya rutere chọọ yaHa ga-enyere Elena Blanco aka, bụ onye hapụrụ ndị uwe ojii mgbe ikpe gara aga nke Purple Network. Nnyocha ahụ ga-edugakwa ha chọpụta na e nwere ọtụtụ ihe nzuzo n'azụ nkwụsị.
Ọrịa - Slavoj Zizek
Ezubere maka 20 maka Mee, nke a nwalee site na ọkà ihe ọmụma, ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na onye na-akwado ndọrọndọrọ ọchịchị Slavoj Žižek bụ otu n'ime akwụkwọ ọgụgụ kacha ọhụrụ nke ụdị ya. Ižek bụ otu n'ime onye kacha mara amara ma soro ndị edemede nke ugbu a, ma banyelarịrị akwụkwọ karịrị 40 nke nkà ihe ọmụma na sinima ma ọ bụ psychoanalysis. Na niile uru nke akwukwo a ga-akara aka na NGO Dọkịta na-enweghị oke.
Na nke a ọ na-atụ aro a echiche ngwa ngwa na nsogbu coronavirus nke na-emebi ụwa niile. Ntughari uche na ihe mmekọrịta nwere na política, na akụ na ụba, nke egwu nwe na izugbe na nnwere onwe ma ọ bụ, kama nke ahụ, nnwere onwe ndị amanyere.
Ọ na-eduga anyị na-eche banyere njikọ n'etiti la mmeba oria ojoo zuru uwa na ụdị akụ na ụba nke ọha mmadụ nke oge a. Na tumadi ọ na-ewelite ajụjụ banyere otu anyị nwere ike gbanwee ọ bụghị naanị ndu anyi, ma ụkpụrụ niile nke ọha mmadụ nke e wuru n'ụkpụrụ ndị dara ngwa ngwa na ọnwa ole na ole.
Ọbara na snow - Jo Nesbø
Nke diri ya 28 maka Mee nke kachasị ọhụrụ si n’aka nna ukwu na-ede akwụkwọ mpụ na Norway ga-amalite. N'ebe ọwụwa anyanwụ Ọbara na snow bụ a inwere onwe ya na usoro a maara nke ọma nke Commissioner Harry Hole. Ọtụtụ obere na onye protagonist, Olaf Johanssennke a hitman akwụ ụgwọ, a antihero onye na-agwa anyị akụkọ ya na mmadụ mbụ.
Ihe edetu nke Etty Hillesum. Ndụ jọgburu onwe ya
Ya egbe na ndokwa maka 4 maka Mee.
Etty Hillesum bụ nke ndị Ndị Juu bourgeoisie si Amsterdam na ya na ezinụlọ ya nwụrụ Auschwitz na 1943. Ha Akwụkwọ Ozi. Akpan akpan nke ịgba akaebe na Etty Hillesum hapuru n’edetu a dina ya uru mmadụ na transcendental nke ahụ kwesịrị ịcheta na afọ a nke afọ 75 nke njedebe nke Agha Secondwa nke Abụọ.
Emehie - Carmen Roman
Roman bụ odeakụkọ nọọ ogologo oge South Ọwa na mgbasa ozi ọzọ. Na akwụkwọ a na-anakọta ihe osise ụfọdụ ụmụ nwanyị nọ n’akụkọ ihe mere eme, nke e ji ihere nke ebubo mmehie mere na mgbagwoju anya ha chọrọ inwere onwe ma ọ bụ site na ndụ naanị ụzọ ha nwere ike ma ọ bụ nwee ike iru ha.
Ya mere, anyi nwere aha dika ndi Phryne, otu n'ime ụmụ nwanyị mara mma nke Gris oge ochie ma ọ bụ Sicilla, akwụna kasị ewu ewu na Rom. Nakwa site n'ebe ahụ, ọ na-agwa anyị banyere Julia, ada nke Emperor Augustus, Agrippina ma ọ bụ Messalina, nwunye nke Emperor Claudius. Ma ọ bụ ndị nke Maria Magdalena, Madam Pompadour, anyị Bella Otero ma ọ bụ omee Joan Crawford, onye gbapụrụ n'ụlọ ya wee nwalee ọdịmma ya na ngosi ahụ, mana ejidere ya maka ịgba akwụna.
Isi mmalite: Nkesa UDL, Casa del Libro, ọ masiri m ịgụ, Editorial Anagrama
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Akwụkwọ edemede 5 mere atụmatụ maka May
Nyocha nke "Campos de Castilla"
"Prosas profanas" ihe ohuru nke Rubén Darío mere